संकटा क्षेत्रको अम्ब्रेला स्ट्रिट जानु भयो त ? - ParyatanBazar.com
संकटा क्षेत्रको अम्ब्रेला स्ट्रिट जानु भयो त ?
पर्यटन बजार९ पुष २०७७, बिहीबार मा प्रकाशित
पुस ९ ,काठमाडौँ। मानिसहरुको आर्कषणका लागि न्युरोड गेटबाट सुन्धारा मार्ग हुँदै संकटा जाने बाटोमा करिब ४०० वटा जति रंगीचंगी छाता करिब १५० मिटरको दुरीमा झुण्ड्याइएको छ। त्यस्तै सडकको छेउछाउमा करिब ३० वटा गमलामा फूलहरु फूलाइएका छन् । स्थानिसबासी, संकटा क्लव र वडाको सहकार्यमा सो छाता राखिएको हो । छाता राखिएसँगै यस क्षेत्रमा मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ ।
टिकटक र सामाजिक सञ्जालबाट बढी चिनिएको यस सडक क्षेत्रमा तस्बिर खिच्ने र टिकटक बनाउनेको भीड पनि उत्तिकै देखिन्छ ।काठमाडौंमा सुरु गरिएको अम्ब्रेला स्ट्रिटको अवधारणाले १० दिनमा नै लोकप्रियता हासिल गरेको ब्यापारी सबिना लामा बताउँछीन् “यहाँको अवलोकन गर्ने मानिसको भिंड ह्वात्तै बढेको छ ,अहिले सम्म ब्यापारमा त्यस्तो फरक त देखिएको छैन तर यसले विस्तारै व्यापार पनि बढाउला भन्ने आशा लिएका छौं ।”
सर्वसाधारणको उपस्थिति सँगै यस क्षेत्रमा पार्किङको समस्या हुन थालेको छ भने, सडकमा आउने गाडी र मोटसाइकलका कारण खुलेर रमाइलो गर्न नपाएको यहाँ आउने मानिसहरूले गुनासो समेत गर्न थालेका छन्।
यसरि बनेको रहेछ योजना ?
मंसिर महिनाको अन्तिम दिन न्युरोडको तबहाल क्षेत्रका व्यापारीहरुबीचको चिया गफको क्रममा कोरोनाको त्रास कम भए पनि व्यापारले गति लिन नसकेको विषयमा सबैले चिन्ता व्यक्त गरे । व्यापारलाई उत्थान गर्ने भन्ने मतहरु पनि आए । कुराकानीकै क्रममा संकटा क्लबका सचिव सिंहले युरोप जाँदा ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’ देखेको सुनाए । त्यही प्रयोग गर्न अरु पनि सहमत भएपछि ८० हजार रुपैयाँ संकलन भयो । सोहि योजना अनुसार न्युरोड गेटबाट सुन्धारा मार्ग हुँदै संकटा जाने बाटोमा करिब ४०० वटा जति रंगीचंगी छाता झुण्ड्याउने काम भयो ।
त्यही क्षेत्रमा पर्ने एउटा बौद्ध स्तुपालाई पनि रातिमा वार्म लाइटले रंगीचंगी बनाइएको छ । यो सडकमा दुईपांग्रे र हलुका चारपांग्रे बाहेक अन्य सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने अव्यवस्थित पार्किङ हटाइएको छ । बिहान नगरपालिका र दिउँसो क्लबका कर्मचारीले नियमित सरसफाइ गर्ने गरेको संकटा क्लबका सचिव सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म ९/१० लाख खर्च भएको छ, जुन क्लब, स्थानीय व्यापारी र नगरपालिका वा वडा कार्यालयले व्यहोरेका छन् ।